एयर होस्टेसको आँखामा आँसु थियो, तर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो – आफ्नै जिबन को भर नहुदा पनि उनि अरुलाइ सान्तोना दिदै थिइनँ – Dainik Sangalo
बुधबार १० कार्तिक २०७८
ग्यास लिक हुँदा घरमा आ, x ग, x ला, x गी, पाँच लाख बराबरको धनमाल ज, x ले, x र नष्ट
म मेरै, कार्यकालमा नेपाल लाई बिकास गरेर सिंगापुर बनाउँछु : रामकुमारी झाँक्री
भाईरल झाक्री कृष्ण घतानिको घरमा कसैले सर्प ल्याएर छोडेको उनकी श्रीमतिको भनाइ (भिडियो हेर्नुस)
भारतले नेपाली भूमि मिचेको बिषयमा ओलीभन्दा झन् कडा बनेर निस्किए प्रचण्ड, मोदी नै झस्किनेगरी यतिसम्म भनिदिए
भो’क मे’ट्न आमाबुबाले आ’फ्नै सन्तानलाई ५०० अमेरिकी डलरमा बे’ चे
पाँचथरमा बाढीमा बेपत्ता थप एकको शव फेला, मृतकको सङ्ख्या ३१ पुग्यो
एयर होस्टेसको आँखामा आँसु थियो, तर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो – आफ्नै जिबन को भर नहुदा पनि उनि अरुलाइ सान्तोना दिदै थिइनँ
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १२, २०७८ समय: १३:५५:२२
“जहाजभित्र त्रास फैलिसकेको थियो। सबैजना रुन थालिसकेका थिए। कतिले भगवान पुकारी रहेका थिए। काठमाडौं फर्किएपछि पनि ८/१० पटक प्रयास गर्नुभयो। जब मैले प्लेनबाट विमानस्थलभित्र नेपाली सेना, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स देखेँ यसपछि अब बाँच्दिन भन्ने लाग्यो।
यसपछि जीन्दगी यति नै रहेछ भन्ने लाग्यो। कतिले ढोका खोल्नुस हामी हाम फाल्छौं समेत भने तर एयरहोस्टेजले नआँतिनुस्, सम्हालिनुस् सुरक्षित अवतरण हुन्छ, भनिरहेका थिए, एयरहोस्टेसको आँखामा आँसु थियो, तर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि झन मनमा चिसो पस्यो। बाँचियो भने फेरी भेटौला भनेर घरमा म्यासेज टाइप गरेको थिए। धन्न सुरक्षित अवतरण भयो र बाँचियो।”
जब पायलटले अवतरण गर्नअुघि ल्याण्डिङ गेयर झार्न खोजे, ल्याण्डिङ गेयर झरेन । समस्या देखियो । विमानले ७–८ पटक विराटनगरको आकाशमाथि फन्को मारिरह्यो । क्याप्टेन एजी शेर्पाले ल्याण्डिङ गेयर झार्ने प्रयास गरिरहे । तर, कुनै सिप चलेन ।
यो सबै हुँदा विमानमा रहेका यात्रुहरुलाई कुनै सूचना दिइएको थिएन । तर विमान ल्याण्ड नगरेपछि यात्रुले प्रश्न सोधेको सोही विमानमा रहेका एक यात्रु प्रताव लिम्बुले बताएका छन् । उनका अनुसार विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकेपछि विमान काठमाडौँ डाइभर्ट गर्न लागेको सूचना भने यात्रुहरुलाई दिइयो ।
विमान डाइभर्टको सूचना सुनाइएपछि यात्रुहरुमा रुवाबासी चलेको लिम्बुले बताए । उनले आफ्नो मनमा उब्जिएको त्रासदीपूर्ण भावना व्यक्त गर्दै भने, ‘विराटनगरमा त्यति डर लागेको थिएन ।
क्याप्टेनले ६–७ पटक प्रयास गर्नु भयो । नसकेपछि काठमाडौँ डाइभर्ट गर्नुभयो । तर, जब काठमाडौँको आकाशमा पनि ८–९ पटक फन्को मार्‍यो अनि मन चिसो भयो ।’ उनका अनुसार काठमाडौँको आकाशमा आइसकेपछि यात्रुहरु रुन थालिसकेका थिए ।
त्यसपछि भने निकै डर लागेको र जीवन नै सकिएको जस्तो लागेको उनले बताए । यसपछि भने आफूले घरमा ‘बाँचे भेटौँला’ भन्दै मोबाइलबाट एसएमएस पठाएको बताए ।विमान भित्रको यो त्रासदीपूर्ण वातावरणका बीच काठमाडौँको आकाशमा १० फन्को मारिसकेपछि विमानको ल्याण्डिङ गेयर झर्‍यो ।
विमान सहजरुपमा अवतरण भयो ।बुद्ध एयरले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा विमान अवतरण गर्दा विमानस्थलमा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहेका सुरक्षाकर्मीले ताली बजाएर खुशी साटेको देखिन्छ । यात्रुहरुले भने पुनर्जीवन पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।भिडियो
Last Updated on: September 28th, 2021 at 1:55 pm
३०५ पटक हेरिएको
१.	उप’चारर्था थाईल्याण्ड रहेका वर्षमान पुनबारे आयो दु’ख द खबर,
२.	भोकले छटपटाउँदा उनीहरू माटो खान्छन् टुहुरा बालिकाहरु।कठै
३.	बिजुली बालेर पैसा नतिर्ने लुटेराहरुको नामवलि निकाली तिर्नलगाउने कुलमान सरलाई सम्मान गर्दैसक्दो सियर गरौँ )
४.	प,क्राउ परेको महिला लो,क बहादुर को दिदी भएको खु,लासा ,एस्तो कुरा गरेको थियो दिदी सँग
५.	कसरी भयो बुटवलमा ज्यान जाने झडप? , प्रहरीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु ५० जना घाइते
६.	बैंकमा पैसा लिन ला-श आफै पुगेपछि, कर्मचारीको सातो गयो
७.	सर्कसमा राख्नपर्ने मान्छे सरकारमा राखेपछिको नतिजा झाक्री,आले,किशान-न्यायधिस सबैलाइ कडा प्रहार रबि लामिछाने (हेर्नुस भिडियो)
८.	बोतलमा लि’ङ्ग छि’रा’उ’दाँ अ’ड्कि’ए पछि पुगे अ’स्पताल, डाक्टरहरु सबै अचम्मित ( भिडियो हेर्नुस)
९.	खाना खाएर निस्केको भए सबै परिवारलाई घरले च्याप्थ्यो’
२१ वटा फिल्म खेलेका यि हिरो- जसलाई धेरैले चिन्दैनन ! ‘म म, र्दा चन्दा उठाएर ज, ला, उ, ने दिन नआओस’ भन्दै रोए (भिडियो हेर्नुस)
को’रोनालाई सामान्य ठान्दा गयो ज्यान
टिकटकभरी भाइरल भएकी १३० किलो तौलकी सानुमाया सुनिलको भाइरल जोडी(भिडियो हेर्नुहोस्)
बिबाह गरेको २ महिनामा नै श्रीमान तरुनी लिएर फरार, जिन्दगी नै बर्बाद बनाइदियो भन्दै मिडियामा (भिडियो)